“Arsenal awood uma lahan inay la tartanto Liverpool” – Arsene Wenger - Hargeele - Wararka Somali State
“Arsenal awood uma lahan inay la tartanto Liverpool” – Arsene Wenger
(London) 09 Okt 2019. Tababarihii hore kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa ka hadlay arragtidiisa kaga aadan nasiibka ay Gunners u yeelan karto sannadkan inay tartanto ama ay ku dhameysato afarta ugu sareysa ee horyaalka Premier League.
Wenger ayaa wuxuu qiray inay adag tahay in Arsenal ay u tartanto hanashada horyaalka xilli ciyaareedkan marka loo eego heerarka sare ay Liverpool ku soo bandhigtay kaddib la shaqeynta Jurgen Klopp.
Macalinka reer France ayaa carabka ku adkeeyay in Arsenal ay tahay inay u ciyaarto xilli ciyaareedkan sida ay ugu soo laaban laheyd tartanka Champions League, isla markaana ay ku dhameysato xilli ciyaareedkan afarta koox ee ugu sarreysa horyaalka.
Arsene Wenger ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Arsenal ma aysan u suurtogelin inay ku dhameysato afarta ugu sareysa xilli ciyaareedkii hore, laakiin waxay fursad weyn u heystaan inay siaas sameeyaan”.
“Waxaan haatan miiska kala sareynta kaga horeeynaa kooxaha Manchester United, Tottenham iyo Chelsea waana inaan sii wadnaa”.
Aqriso:- Nuxurka Qudbadda Madaxweyne Farmaajo ee furitaan Baarlamaanka
Barcelona oo dooneysa inay dib ugu laabato xiisaha xiddig horey bar-tilmaameed xoogan ugu ahaa
Sagaal ciyaartoy waaweyn oo la filayo inay ka tagaan kooxahooda suuqa furmi doono bisha Janaayo…(Yaa kaga jira kooxdaada?)
“Bixitaanka Messi wax wal-wal ah kama qabo… waana in la xiro wararka la xiriira Neymar Jr” – Piqué
Frank Lampard oo ka hadlay shaqo ka ceyrintii Unai Emery ee kooxda Arsenal